Maitiro ekugadzirisa yekumhanyisa kumhanya kweiyo 3D Kubata uye iyo haptic mhinduro | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa yekumhanyisa kumhanya kweiyo 3D Kubata uye iyo haptic mhinduro
Nekuvhurwa kweIOs 13, Apple yakawedzera iyo haptic sensor basa kuwedzera zviito nekukurumidza kuwedzera kune kumwe kudyidzana kupfuura pakutanga. yaida kuonekwa kwekumanikidza pachiratidziro ne 3D Kubata. Pamwe neichi chitsva mashandiro, icho chaisave chekufarira kwevashandisi vazhinji, zvakare chinosanganisira kugona kugadzirisa iyo nguva yekumanikidza.
Ichi chiitiko chitsva, icho chaive nerunyerekupe mumwedzi yakatungamira pakuunzwa kweiyo iPhone 11, iPhone 11 Pro, uye iPhone 11 Pro Max haina kuziviswa pachiitiko chekutanga cheIOS 13, panguva yeWWDC 2019, asi zvaireva kupera kweiyo 3D Kubata tekinoroji, tekinoroji yakabva paruoko rweiyo iPhone 6s uye 6s Plus.
Mukati meiyo haptic sensor yekumisikidza sarudzo, iOS inotibvumidza isu seta iyo yekubata nguva. Kubudikidza nesarudzo iyi, isu tinokwanisa kugadzirisa iyo nguva inotora kuti iyo system iratidze kutarisisa kwemukati, zviito uye mamenu ezvinyorwa. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzirisa nguva yekupindura, iwe unofanirwa kungotevera matanho aya:
Kutanga, tinotungamira kune iyo Zvirongwa iOS 13. Inofanira kuyeukwa kuti basa iri rinongowanikwa chete kubva kuIOS 13, saka kana uine vhezheni yechinyakare, iyi sarudzo haizovepo.
Tevere, isu tinowana iyo menyu Accessibility uye mukati mekuwanika kune iyo submenu Bata.
Mune menyu sarudzo, iyo inotibvumidza isu kumisikidza uye kusaita iyo 3D Kubata uye haptic mhinduro, pamusoro pekugadzirisa kunzwisisika kweiyo 3D Kubata, danho rekumanikidza rinodiwa kuti riite. Nokusingaperi yakagadzirirwa kuMedium.
Tevere, isu tinowana iyo yekugadzirisa sarudzo yatiri kutsvaga: Kubata kwenguva. Nokusingaperi, inoiswa ku Pfupi, saka iyo nguva yainotora kuratidza zvemukati zvekutarisa, zviito, uye mameseji emameseji zvaderedzwa. Kana isu tichida kuti nguva yekupindura iwedzerwe, tinofanirwa kusarudza Wide.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekugadzirisa yekumhanyisa kumhanya kweiyo 3D Kubata uye iyo haptic mhinduro
Nyowani AirPods X uye pamusoro-nzeve mahedhifoni mukuona
Apple inopa $ 10 mamirioni kurwisa COVID-19 ku "Nyika Imwe: Pamwe Pamba"